Semalt - Nzira dzinokosha dzekudzivirira marware zvebhizimisi duku
Iwe uri injinjiniya? Kana iwe uri ipapo musha wemabhizimisi ari kuchema rubatsiro rwako. Sei? Zvakanaka, maererano nehuwandu hunoonekwa naSyantec, 40% yehuyeri dzose dzakatambudzwa kurwisana nefemu dzine vashandi vasingapfuuri 500. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, National Cyber ​​Security Alliance yakaratidza kuti 1 mumabhizimisi mashanu maduku ose anofanira kutarisana nekutya kwe cyber gore negore. Kubva nhamba iyi, 60% haadzoki. Vanowanzovhara chitoro pashure pemwedzi mitanhatu chete - best service plumber. Izvi ndezvikonzero zvekuti iwe unowana mabhizimisi maduku achikumbira kuvandudzwa pamusoro pehutano hwekuchengetedza kwekuchengetedza.
Verengera kuti uone kuti malware angakanganisa sei bhizimisi rako uye shandisa mutungamiri, unotsanangurwa naOlver King, Mutengi Wakatambira Mutoro we Semalt , kuti uzvidzivirire kubva kune imwechete (malware).
Chii chinonzi malware uye chinogona kuvhiringidza sei bhizinesi
Malware ndiyo inonyorwa yezvinonyangadza software. Nenzira yakajeka, iyo chirevo 'mal' ine chirevo chakaipa muchiSpain nemimwe mitauro yechiLatin (zvinoreva zvakaipa). Heano mamwe matsanangudzo ekukubatsira iwe kunzwisisa.
Sezvaunogona kuona, haisi mungozi asi pane izwi rinoshandiswa kureva chero software chero ipi zvayo inozviisa mumutambo wako pasina chiremera chako. Muzviitiko zvakawanda, chinangwa chayo ndechokupedza dhiyabhorosi iyo inoshandiswa kubira pachepa yako, nhamba yekadhi rechikwereti, nezvimwewo. Viruses, ransomware, uye spyware yose yemarware.
Sezvo marapirwo aya aiverenga pamusoro pehupenyu, mavairasi anogona kuzvinyora zvakare ndokupararira kune zvimwe zvidimbu zve diski kana mafaira ekuregera. Chirwere chinowanzorongwa kuti chinyorwe, chesa kana shanduko dzemakombiyuta.
Sezvo zita racho rinoratidza, spyware inotumirwa kunosangana nemabasa ako kunyanya iyo yakaitwa paIndaneti.Tinenge tichitaura nezveshamwari dzako dzevhidhiyo, nhau yevashanduri, uye makiki ayo anotengeswa kune vanofarira kazhinji Kuvhara mararamiro ako. Muzviitiko zvakanyanyisa, spyware inogona kuba nemashoko ako ekutumira uye mamwe mashoko kuburikidza nekugadzira matanda
Iyi chirongwa chakakomba chinoshandiswa nevashambadzi kubata bhizinesi. Vanotora dare re database kana sevavha saka vanoda kubhadhara kuitira kuti vagone kusunungura rayo. CryptoLocker ndiyo muenzaniso wakanaka we ransom ransom. Yakange yakasunungurwa muna 2013.
Kudzivirira bhizinesi rako kubva kune malware
Kuti bhizinesi rako ridzivirirwe pamusana pekutyisidzira kwemaware, tarisa zvinotevera:
1. Chengetedza ma PC antivirus yako. Zvechokwadi kuisa chirongwa chinonzi antivirus chirongwa-chinofanira-asi asi chirongwa chichangobva kuwanikwa nemusunguri? Iyo inovandudzwa here? Iine ine anti anti malware feature?
2. Shandisai chaiyo yekushandura, zvirongwa zvepamutemo, uye firmware. Usatema makona nekuisa 'cracked' maitiro ekushanda, software uye mapurogiramu. Tenga kana kutumira kune software chaiye. Chengetedza kana moto unowanikwa.
3. Gadzira uye simbisa purogiramu yephasiwedi - edza vatungamiri vepawedi kana kutanga nokushandisa zvakaoma-kufungidzira mapepa epafoni nhamba dzema alpha uye vanhu vanokosha.
4. Usatora mikana - kuti urege kutyisidzirwa, shandura keseti pose apo mushandi akadzingwa kana kuti achizvidira kusiya. Nenzira iyo mushandi anonyadzisa haagoni kukuvhiringidza.
5. Dzidzisa vashandi vako - vimbisa kuti havakwanisi kana kuisa zvikanganiso zvinoshungurudza uye zvibatanidzwa. Itai kuti vashandise mapurogiramu ose akadzingwa kuburikidza nehurongwa hwekare.